ASUS dia manolotra ny ZenFone AR miaraka amin'i Google Tango | Vaovao momba ny gadget
ASUS dia manolotra ny ZenFone AR miaraka amin'ny Project Tango
Lenovo dia nanome ny manomboka shotgun miaraka amin'ny Lenovo Phab 2 Pro ho an'ny inona ilay Project Tango ary telefaona afaka manana fampitomboana ny zava-misy eo imason'ny mpampiasa Amin'ny alàlan'ny efijerinao sy ireo sensor rehetra azonao atao an-tsarintany ny efitrano misy anao amin'izany fotoana izany.
ASUS dia nitsambikina tamin'ny gadona zava-misy namboarina nomen'ny Project Tango ary mampahafantatra antsika ny ZenFone AR. Fantsona iray izay nahita ny hazavana tao CES any Las Vegas ora vitsy lasa izay ary tsy manana famaritana avo loatra toa azy Fahatsiarovana RAM 8 GB.
Ny ASUS Zenfone AR kendrena ny zava-misy nampitomboina tanteraka araka ny asehon'ny anarany manokana. Manolotra fanohanana an'i Google Tango izy ary na DayDream aza, sehatra virtoaly virtoaly Google izay tsy hitantsika afa-tsy ny Google Pixel.
Azontsika atao ny miresaka amin'ny Zenfone AR momba ny puce Qualcomm Snapdragon 821 sy ireo RAM 8 GB izay mahatonga azy io ho biby tena volontsôkôlà. ny ny efijery dia 5,7 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana QHD ary ny teknolojia SuperAMOLED.
Amin'ny sary dia miavaka amin'ny fomba miavaka ihany koa izy amin'ny fananana Fakantsary 3; ny iray amin'izy ireo dia MP 23, raha ny roa kosa dia tompon'andraikitra amin'ny fakana ny fihetsiketsehana sy ny habaky ny efitrano ahitantsika ny tenantsika.
Amin'ny antsipiriany roa hanasongadinana dia afaka manome hevitra momba anao izahay rafitra fanamafisam-peo miorina amin'ny mpandahateny andriamby 5 ary ny rafi-pitetezana rano ao anatiny hampidina ny mari-pana amin'ny terminal.
ASUS ZenFone AR famaritana
Fampisehoana Quad HD SuperAMOLED 5,7-inch
Qualcomm Snapdragon 821 chip dia niorina tamin'ny 2,35 GHz
64 fahatsiarovana anatiny
Fakan-tsary lehibe 23 megapixel misy lantihy roa natao ho an'ny Project Tango
Fanohanana ho an'ny Project Tango sy DayDream
Tsy dia hainay loatra ny vidiny toy ny daty fandefasana ny terminal, ka tsy misy zavatra hafa miandry azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » ASUS dia manolotra ny ZenFone AR miaraka amin'ny Project Tango
Ny marika famantaranandro angano Casio, dia manolotra ny famantaranandro faharoa
Ny Asus Zenfone 3 Zoom dia efa ofisialy ary tsy hamela anao tsy hiraharaha izany